Na ịhụnanya: n'etiti mmetụta uche na ọgụgụ isi (kọlụm 22) - Rabbi Michael Avraham
Na Ịhụnanya: N'etiti Mmetụta na Uche (Osisi 22)
Nkwupụta 16	/ 19 Elul 09 - 2016/XNUMX/XNUMX 26 / 06 / 2019
N'ime akụkụ Torah nke izu a (ma a na m arịọ) parsha "Ma hụ Onyenwe anyị Chineke gị n'anya" pụtara site n'ịgụ Shema, nke na-ekwu banyere iwu ahụ ka ịhụ Onyenwe anyị n'anya. Mgbe m nụrụ oku a taa, echetara m ụfọdụ echiche m nwere n’oge gara aga gbasara ịhụnanya n’ozuzu, na ịhụn’anya nke Chineke, ma enwere m isi ihe ole na ole gbasachara gbasara ha.
N'etiti mmetụta uche na uche na mkpebi
Mgbe m na-akụzi na a yeshiva na Yeruham, e nwere ụmụ akwụkwọ jụrụ m banyere ị na-ahọrọ a ibe, ma na-eso mmetụta (obi) ma ọ bụ uche. M zara ha na ọ bụ naanị mgbe uche, ma na uche kwesịrị iburu n'uche ihe obi na-eche (njikọ mmetụta uche, kemịkalụ, na onye òtù ọlụlụ) dị ka otu n'ime ihe na mkpebi ya. Ekwesịrị ime mkpebi n'akụkụ niile n'uche, ọrụ obi bụ itinye ntinye nke kwesịrị iburu n'uche ma ọ bụghị mkpebi. Enwere ihe abụọ nwere ike ime nke a: otu bụ teknụzụ. Ije ije na-eso obi nwere ike ịkpata ihe na-ezighị ezi. Ọ bụghị mgbe niile ka mmetụta uche bụ naanị ihe kacha mkpa n'okwu ahụ. Uche na-edozi anya karịa obi. Nke abụọ bụ nnukwu. Mgbe ị nyefere ikike ị naghị ekpebi n'ezie. Mkpebi site na nkọwa bụ omume uche (ma ọ bụ kama: afọ ofufo), ọ bụghị nke mmetụta uche. A na-eme mkpebi site n'amamihe ikpe, ebe mmetụta uche na-ebilite n'ime ya n'onwe ya ọ bụghị n'ikpe nke m. N'ezie, ịgaso obi abụghị mkpebi ma ọlị. Ọ bụ mkpebi siri ike mana ikwe ka ọnọdụ ahụ dọkpụrụ gị n'azụ ha ebe ọ bụla ọ dị.
Ka ọ dị ugbu a, echiche a bụ na ọ bụ ezie na ịhụnanya bụ ihe dị n'obi, ịhọrọ onye ọlụlụ abụghị naanị ihe gbasara ịhụnanya. Dị ka e kwuru, mmetụta uche bụ nanị otu n'ime ihe ndị na-akpata ya. Ma echere m na nke ahụ abụghị ihe niile. Ọbụna ịhụnanya n'onwe ya abụghị nanị mmetụta uche, ma eleghị anya, ọ bụghị ọbụna ihe bụ isi na ya.
Na ịhụnanya na agụụ
Mgbe Jekob na-arụrụ Rechel ọrụ afọ asaa, Akwụkwọ Nsọ na-ekwu, “Ma ụbọchị ole na ole ga-adị n'anya ya n'ịhụnanya ọ hụrụ ya.” (Jenesis XNUMX:XNUMX). A maara ajụjụ a na nkọwa a yiri ka ọ bụ ihe megidere ahụmahụ nkịtị anyị. Ọ na-abụkarị mgbe mmadụ hụrụ mmadụ ma ọ bụ ihe ọ bụla n’anya ma na-echere ya, ụbọchị ọ bụla na-adị ya ka ọ̀ bụ mgbe ebighị ebi. Ebe amaokwu a na-ekwu na afọ asaa o jere ozi dị ka ụbọchị ole na ole n'anya ya. Ọ bụ nnọọ ihe megidere echiche anyị. A na-akọwakarị na nke a bụ n’ihi na Jekọb hụrụ Rechel n’anya, ọ bụghịkwa onwe ya. Onye hụrụ ihe ma ọ bụ mmadụ n'anya ma chọọ ya maka onwe ya n'ezie na-etinye onwe ya n'etiti. Ọ bụ mmasị ya na-achọ mmezu, ya mere ọ na-esiri ya ike ichere ruo mgbe ọ meriri ya. Ọ hụrụ onwe ya n'anya, ọ bụghị onye ibe ya. Ma ọ bụrụ na nwoke hụrụ onye òtù ọlụlụ ya n'anya na omume ya na-eme ya ma ọ bụghị maka ya, mgbe ahụ ọbụna ọtụtụ afọ nke ọrụ yiri ya obere ego.
Don Yehuda Abarbanel n'akwụkwọ ya Conversations on Love, yana onye ọkà ihe ọmụma Spanish, onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na onye nta akụkọ Jose Ortega i Gast, n'akwụkwọ ya Five Essays on Love, ịmata ọdịiche dị n'etiti ịhụnanya na agụụ mmekọahụ. Ha abụọ na-akọwa na ịhụnanya bụ mmetụta centrifugal, nke pụtara na akụ ike ya na-eche onye ahụ ihu n'èzí. Ebe agụụ mmekọahụ bụ mmetụta centrifugal, ya bụ, akụ nke ike na-atụgharị site n'èzí gaa na ya, n'ime. N'ịhụnanya onye nọ n'etiti bụ onye a hụrụ n'anya, ebe n'ime ọchịchọ onye nọ n'etiti bụ onye hụrụ n'anya (ma ọ bụ agụụ, ma ọ bụ agụụ). Ọ chọrọ imeri ma ọ bụ merie onye hụrụ onwe ya n'anya. Banyere nke a anyị scouts ekwuworị (ebe ahụ): A ọkụ azụ hụrụ azụ? Ee. Ya mere, gịnị mere ọ na-eri ha?!
N’okwu a, e nwere ike ikwu na Jekọb hụrụ Rechel n’anya, ọ bụghịkwa agụụ maka Rechel. Agụụ nwere ihe onwunwe, nke pụtara na ọchịchọ ahụ na-achọ itinye ihe ọzọ ọ na-agụ ya agụụ, n'ihi ya, ọ pụghị ichere ka ọ mee. Ụbọchị ọ bụla na-adị ya ka ọ bụ mgbe ebighị ebi. Ma onye hụrụ ya n'anya chọrọ inye onye ọzọ (onye a hụrụ n'anya), n'ihi ya, ọ dịghị enye ya nsogbu ịrụ ọrụ ruo ọtụtụ afọ ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe dị mkpa ka ọ mee.
Ikekwe enwere ike ịgbakwunye akụkụ ọzọ na ọdịiche a. Ihe atụ gbasara akụkọ ifo maka ịkpọlite ​​ịhụnanya bụ obe Cupid rapaara n’ime obi onye hụrụ ya n’anya. Ihe atụ a na-ezo aka n'ịhụnanya dị ka mmetụta mmetụta na-ebilite n'ime obi onye hụrụ ya n'anya n'ihi ihe ụfọdụ dị na mpụga. Nke a abụghị mkpebi ya ma ọ bụ ikpe ya. Mana nkọwa a dabara adaba karịa agụụ kama ịhụ n'anya. N'ịhụnanya enwere ihe kariri nke na-enwechaghị mmuo. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ dị ka ọ na-esi n'onwe ya pụta n'enweghị iwu na iwu na enweghị uche, ọ nwere ike ịbụ echiche efu, ma ọ bụ n'ihi ọrụ uche na nke mmụọ nke bu ụzọ malite oge nke edemede ya. Uche m wuru na-akpọte n'ụra n'ihi otu m si kpụzi ya. Ya mere, n'ịhụnanya, n'adịghị ka agụụ mmekọahụ, e nwere akụkụ nke uche na ọchịchọ ọ bụghị naanị mmetụta mmetụta nke na-ebilite n'adabereghị na m.
Ịhụnanya Chineke: mmetụta uche na ọgụgụ isi
Maimonides kwuru banyere ịhụnanya Chineke n'ebe abụọ n'akwụkwọ ya. N'ime iwu ndị bụ isi nke Torah, ọ na-ekwu maka iwu nke ịhụ Chineke n'anya na usoro ha niile, na kwa n'iwu nke nchegharị ọ na-ekwughachi ha nkenke (dị ka ọ dị n'isiokwu ndị ọzọ na-emegharị na iwu nchegharị ọzọ). Ná mmalite nke isi nke iri nke Teshuva, o kwuru banyere ọrụ Jehova maka aha ya, na ihe ndị ọzọ o dere:
A. Ka onye ọ bụla ghara ịsị na m na-eme iwu nke Torah ma na-eme ihe n'amamihe ya ka m wee nweta ngozi niile e dere n'ime ya ma ọ bụ ka m nwee ndụ nke ụwa ọzọ, na ịla ezumike nká na mmebi iwu nke Torah dọrọ aka ná ntị. megide nke mere na Onye a, nke na-arụ ọrụ n'ụzọ dị otú a bụ onye na-atụ egwu na ọ bụghị omume nke ndị amụma na ọ bụghị omume nke ndị amamihe, na Chineke adịghị arụ ọrụ otú a ma ndị nke ala na ndị inyom na ndị nta. ndị na-akụziri ha ka ha na-arụ ọrụ egwu ruo mgbe ha na-amụba ma rụọ ọrụ n'ihi ịhụnanya.
B. Onye na-arụ ọrụ ịhụnanya na-emeso Torah na Matzah ma na-eje ije n'ụzọ amamihe ọ bụghị maka ihe ọ bụla n'ụwa na ọ bụghị n'ihi egwu ihe ọjọọ na ịghara keta ezi ihe kama ọ na-eme eziokwu n'ihi na ọ bụ eziokwu na njedebe nke ihe ọma na-abịa n'ihi na ọ bụ eziokwu. nke ya, ma nke a bụ omume ọma dị ukwuu nke e hụrụ n’anya dị ka nke ọ rụrụ ma ọ bụghị n’ihi ịhụnanya na ọ bụ omume ọma nke Onye Nsọ ji gọzie site n’aka Mozis ka e kwuru na ị hụrụ Jehova bụ́ Chineke gị n’anya; ma mgbe mmadụ hụrụ Onye-nwe n’anya nke ọma ọ ga-eme ngwa ngwa ahụ matzah niile site n’ịhụnanya.
Maimonides n'okwu ya n'ebe a na-akọwapụta n'etiti ọrụ nke Chineke na aha ya (ya bụ, ọ bụghị maka mmasị n'èzí) n'ịhụnanya o nwere n'ebe ọ nọ. Ọzọkwa, na Halacha B ọ kọwara ịhụnanya Chineke dị ka ime eziokwu n'ihi na ọ bụ eziokwu na ọ bụghị n'ihi ihe ọ bụla ọzọ. Nke a bụ nnọọ nkà ihe ọmụma na oyi nkọwa, na ọbụna alienating. Enweghị akụkụ mmetụta uche ebe a. Ịhụnanya Chineke bụ ime eziokwu n’ihi na ọ bụ ya bụ eziokwu, ọ bụkwa ya. Ya mere Maimonides ji dee na ịhụnanya a bụ omume ọma nke ndị maara ihe (ọ bụghịkwa mmetụta uche). Nke a bụ ihe a na-akpọ mgbe ụfọdụ "ịhụnanya ọgụgụ isi nke Chineke."
Na ebe a, ozugbo na halakhah na-esonụ, ọ na-ede ihe dị iche:
nke atọ. Oleekwa otú ịhụnanya kwesịrị ekwesị si bụrụ na ọ ga-ahụ Gd n'anya nke ukwuu na ịhụnanya siri ike ruo mgbe mkpụrụ obi ya na-ejikọta n'ịhụnanya nke Gd ma na-ehie ụzọ mgbe niile na ya dị ka onye ọrịa nke ịhụnanya nke uche na-enweghị onwe ya n'ịhụnanya. Nwanyị ahụ na ya na-emehie mgbe nile na ya na Saturday site na nke a ga-abụ ịhụnanya nke Chineke n'ime obi ndị hụrụ ya n'anya bụ ndị na-emehie mgbe nile na ya dị ka e nyere n'iwu na obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum, na ọ bụ na Solomon kwuru site a. ilu na m na-arịa ọrịa ịhụnanya, na abụ ọ bụla nke ilu bụ maka nke a.
N'ebe a, ịhụnanya na-ekpo ọkụ na mmetụta mmetụta dịka ịhụnanya nwoke nwere n'ebe nwanyị nọ. Dị ka akọwara n'akwụkwọ akụkọ kacha mma, na karịsịa na Abụ nke Abụ. Onye hụrụ n'anya na-arịa ọrịa ịhụnanya ma na-emehie mgbe niile na ya. Ọ pụghị ịdọpụ uche ya n'oge ọ bụla.
Kedu ka ihe a niile si metụta foto ọgụgụ isi oyi akọwara na halakha gara aga? Maimonides ọ̀ gbagwojuru anya, ka ò chefuru ihe o dere n'ebe ahụ? Aga m achọpụta na nke a abụghị ihe mgbagha anyị hụrụ n’etiti ebe abụọ dị iche iche n’ihe odide ya, ma ọ bụ n’etiti Maimonides na ihe e kwuru na Talmud. Enwere iwu abụọ dị nso na nso nso a na-asụ asụsụ dị iche iche site na ibe ha.
Echere m na mmadụ kwesịrị ịkpachara anya ebe a maka ọdịda uru na ngbanwe mmezi. Mgbe i wetara ilu iji gosi ihe, ilu ahụ nwere ọtụtụ nkọwa na ọ bụghị ha niile metụtara ozi na ilu. Mmadụ kwesịrị ịchọta isi ihe ilu ahụ bịara kụzie, gharakwa iwepụta ihe ndị fọdụrụ n’ime ya nkenke. Echere m na ilu dị na Halacha XNUMX na-abịa na-ekwu na ọ bụ ezie na ịhụnanya nke Chineke bụ ọgụgụ isi ma ọ bụghị nke mmetụta uche, ọ ga-abụrịrị na-emehie mgbe niile ma ghara ịdọpụ uche n'obi. Ilu ahụ na-abịa kụziere ịdịte aka nke ịhụnanya dịka ịhụnanya nwoke maka nwanyị, mana ọ bụchaghị ụdị mmetụta mmetụta ịhụnanya nke ịhụnanya.
Ọmụmaatụ nke nchegharị, aja mgbaghara mmehie
M'gālaghachi kwa nwa oge ọzọ n'oge obi-utọ nke Jerusalem. Mgbe m nọ ebe ahụ, ụlọ akwụkwọ sekọndrị gburugburu na Sde Boker bịakwutere m wee gwa m ka m gwa ụmụ akwụkwọ na ndị ọrụ n'oge Ụbọchị Iri nke Nchegharị na Mkpuchi Mmehie, Mgbaghara na Mgbaghara, ma ọ bụghị n'ọnọdụ okpukpe. Eji m ajụjụ m jụrụ ha malite okwu m. Ka e were ya na Ruben tiri Saịmọn ihe, akọnuche ya na-akwara ya njọ, n’ihi ya, o kpebiri ịga mee ka obi dị ya mma. O ji obi ya niile rịọ ya mgbaghara ma rịọ ya ka ọ gbaghara ya. N'aka nke ọzọ, Levy kụkwara Shimon (Ma eleghị anya Shimon bụ nwa nwoke isi nke klas), ọ nweghịkwa ụta maka nke ahụ. Obi ya anaghị emekpa ya ahụ, ọ nweghị mmetụta ọ bụla n'okwu ahụ. N'ezie, ọ chọghị ịma banyere nke ahụ. Kpa ye oro, enye ama ọfiọk ke imọ inam idiọkn̄kpọ onyụn̄ abiak Shimon, ntre enye n̄ko ebiere ndika n̄kpe enye efen efen. Mmụọ ozi Gebriel bịakwutere Saịmọn ahụ na-adịghị mma ma kpugheere ya omimi nke obi Ruben na Livaị, ma ọ bụ ikekwe Saịmọn n’onwe ya ghọtara na nke a bụ ihe na-eme n’obi Ruben na Livaị n’ime. Gịnị ka o kwesịrị ime? Ị na-anabata mgbaghara Reuben? Gịnịkwanụ banyere arịrịọ Levy? Kedu n'ime arịrịọ ndị ahụ ka ekwesịrị mgbaghara?
N'atụghị egwu, mmeghachi omume sitere na ndị na-ege ntị mara mma na-agbanwe agbanwe. Arịrịọ Reuven bụ eziokwu ma kwesịkwa mgbaghara, n'agbanyeghị Levy nwere ihu abụọ ma ọ nweghị ihe mere ọ ga-eji gbaghara ya. N'aka nke ọzọ, m rụrụ ụka na n'uche nke m na ọnọdụ dị nnọọ iche. E bu n’obi rịọ mgbaghara Reuben iji mee ka akọnuche ya mee ya ihe mgbu. Ọ na-arụ ọrụ maka onwe ya (centrifugalally), n'ihi mmasị onwe ya (iji mee ka afọ mgbu ya na ihe mgbu nke akọ na uche dị jụụ). Levy, n'aka nke ọzọ, na-eme omume dị ọcha nke ukwuu. Ọ bụ ezie na ọ dịghị ihe mgbu afọ ma ọ bụ obi mgbawa, ọ ghọtara na ya emewo ihe na-ezighị ezi nakwa na ọ bụ ọrụ ya ime ka obi dị Saịmọn ahụ e merụrụ ahụ obi, n’ihi ya, o mere ihe a chọrọ n’aka ya ma rịọ ya mgbaghara. Nke a bụ ihe omume centrifugal, dị ka a na-eme ya maka onye a tara ahụhụ ọ bụghị maka onwe ya.
Ọ bụ ezie na n'ime obi ya Levy adịghị eche ihe ọ bụla, ma gịnị mere o ji dị mkpa? E wuru ya dị iche na Reuben. Amygdala ya (nke na-ahụ maka ọmịiko) mebiri emebi ya mere ebe mmetụta uche ya anaghị arụ ọrụ nke ọma. Gịnị mezie?! Na na usoro ebumpụta ụwa nke mmadụ kwesịrị isonye na nkwanye ùgwù anyị nwere n'ebe ọ nọ? N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ bụ kpọmkwem mmerụ ahụ nke a na-enye ya ohere ime ihe n'ụzọ dị ọcha, nke ọma na nke zuru oke, nanị n'ihi Shimon, ya mere o kwesịrị mgbaghara.
Site n'akụkụ ọzọ enwere ike ịsị na Reuben na-eme ihe n'ezie site na mmetụta uche, ebe Levy na-eme ihe ahụ site n'ikpe na ikpe nke ya. Ekele omume na-abịara mmadụ maka mkpebi ya ọ bụghị maka mmetụta na ebumnobi ndị na-ebilite ma ọ bụ na-adịghị ebili n'ime ya.
Mmetụta dị ka ihe kpatara ya ma ọ bụ n'ihi ya
Achọghị m ịsị na ikpe ọmụma ma ọ bụ nchegharị na-akpaghasị ụkpụrụ omume nke omume ma ọ bụ nke onye ahụ. Ọ bụrụ na Levy kwadoro Shimon maka ihe ziri ezi (centrifugal), ma n'otu oge ahụ ọ na-enwe mmetụta nke obi amamikpe na-esochi mmerụ ahụ ọ kpatara ya, omume ahụ zuru oke ma dị ọcha. Ọ bụrụhaala na ihe mere o ji eme ya abụghị mmetụta uche, ya bụ, ikpuchi ọkụ dị n'ime ya, kama ọ na-eweta ọgwụgwọ na Saịmọn ahụ nọ n'ahụhụ. Ịdị adị nke mmetụta uche, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe kpatara omume nke ịdị n'otu, ekwesịghị igbochi nyocha nke omume na ịnakwere arịrịọ maka mgbaghara. Onye nkịtị nwere mmetụta dị otú ahụ (amygdala na-ahụ maka ya), ma ọ chọrọ ma ọ bụ na ọ chọghị. Ya mere o doro anya na ọ naghị egbochi nnata nke ngwa ahụ. Ma kpomkwem n'ihi nke a mmetụta mmetụta adịghịkwa mkpa ebe a, n'ihi na ọ na-ebilite adịghị agbaso mkpebi m ma nke onwe ya (ọ bụ ụdị mmuo). mmuo adịghị egosi iguzosi ike n'ezi omume ma ọ bụ adịghị ike. A na-ekpebi ụkpụrụ omume anyị site na mkpebi ndị anyị na-eme, ọ bụghị site na mmetụta uche ma ọ bụ mmuo nke na-ebilite n'ime anyị n'enweghị nchịkwa. Akụkụ mmetụta uche adịghị egbochi ma n'ihi otu ihe ahụ ọ dịghịkwa mkpa maka ekele omume. Ịdị adị nke mmetụta uche kwesịrị ịbụ nnọpụiche na ụgbọ elu nke ikpe omume.
Ọ bụrụ na e kere mmetụta ahụ n'ihi nghọta nke ọma nke nsogbu omume na omume ahụ, mgbe ahụ ọ bụ ihe na-egosi omume ọma nke Reuben. Ma ọzọ, Levy bụ onye na-ata ahụhụ na amygdala na ya mere na-adịghị zụlite mmetụta dị otú ahụ, mere mkpebi ziri ezi nke omume, ya mere, ọ dịghị mkpa ka ọ bụrụ otuto na ekele maka Reuben. Ọdịiche dị n'etiti ya na Reuben bụ naanị na nhazi ụbụrụ ha ọ bụghị n'ikpe omume na mkpebi ha. Dị ka ekwuru, nhazi nke uche bụ eziokwu na-anọpụ iche na enweghị ihe jikọrọ ya na ekele omume mmadụ.
N'otu aka ahụ, onye edemede nke Beading Dew dere na mmalite ya na leta C:
Sitekwa n’ihe m kwuru n’ime ya, cheta ihe m nụrụ ka ụfọdụ ndị na-ekwu site n’ụzọ nke uche gbasara ọmụmụ Torah anyị dị nsọ, ma kwuo na onye na-amụ ihe na-eme ka ihe ọhụrụ dị ọhụrụ ma nwee obi ụtọ ma nwee mmasị n’ihe ọmụmụ ya, anaghị amụ Torah. , Ma onye na-amụta ihe ma na-atọ ụtọ mmụta ya, na-etinye aka na mmụta ya yana ihe ụtọ n'onwe ya.
Ma n'ezie ọ bụ a ma ama ndudue. N'ụzọ megidere nke ahụ, n'ihi na nke a bụ isi okwu nke iwu ka a mụọ Torah, ka ọ bụrụ isii na-enwe obi ụtọ na anụrị n'ọmụmụ ihe ya, mgbe ahụ, okwu nke Torah na-eloda n'ime ọbara ya. Ma ebe ọ bụ na okwu nke Torah na-atọ ya ụtọ, ọ rapara na Torah [ma hụ nkọwa nke Rashi Sanhedrin Noa. D.H. na gluu].
Ndị "na-ezighị ezi" na-eche na onye ọ bụla na-enwe obi ụtọ ma na-enwe mmasị n'ọmụmụ ihe, nke a na-emerụ uru okpukpe nke ọmụmụ ihe ya, ebe ọ bụ na a na-eme ya n'ihi ihe ụtọ ọ bụghị n'ihi eluigwe (= maka onwe ya). Mana nke a bụ mmejọ. Ọṅụ na obi ụtọ adịghị ewepụ uru okpukpe bara n'omume ahụ.
Mana nke a bụ naanị otu akụkụ nke mkpụrụ ego ahụ. Ọ gbakwụnye akụkụ ya ọzọ:
Na Modina, na onye na-amụ ihe abụghị n'ihi mitzvah nke ọmụmụ, nanị n'ihi na ọ na-enwe mmasị na ọmụmụ ya, n'ihi na a na-akpọ mmụta ọ bụghị n'ihi na ya onwe ya, dị ka ọ na-eri matzah ọ bụghị n'ihi mitzvah naanị maka ndị na-amụ. n'ihi iri ihe ụtọ; Ha we si, Ọ gaghi-eme ihe ọ bula ọzọ ma-ọbughi aha-ya, nke nāpughi n'obi-ya. Ma ọ na-amụta n'ihi a mitzvah na-atọ ụtọ ọmụmụ ya, n'ihi na ọ bụ ihe ọmụmụ maka aha ya, na ihe niile dị nsọ, n'ihi na ihe ụtọ bụkwa a mitzvah.
Ya bụ, ọṅụ na obi ụtọ adịghị ebelata uru nke omume ahụ ma ọ bụrụhaala na ejikọta ya na ya dị ka mmetụta dị n'akụkụ. Ma ọ bụrụ na mmadụ amụta maka obi ụtọ na ọṅụ, ya bụ, ihe ndị ahụ bụ mkpali maka mmụta ya, ọ bụ ezie na ọ na-amụta ihe ọ bụghị maka onwe ya. N'ebe a, ha "ezighi ezi." N'okwu anyị, a na-ekwu na mmejọ ha abụghị n'iche na e kwesịghị ime ọmụmụ ihe ahụ n'ụzọ centrifugal. N'ụzọ megidere nke ahụ, ha ziri ezi. Ihe ha mejọrọ bụ na ịdị adị nke ihe ụtọ na ọṅụ na-egosi n'echiche ha na nke a bụ omume centrifugal. Ọ dịghị mkpa n'ezie. Mgbe ụfọdụ ihe ụtọ na ọṅụ bụ mmetụta uche nke na-abịa nanị n'ihi mmụta ma ghara ịbụ ihe kpatara ya.
Laghachi n'ịhụnanya Chineke
Nkwubi okwu na-apụta site na ihe dị ugbu a bụ na foto m kọwara na mmalite ezughị ezu, ọnọdụ ahụ dịkwa mgbagwoju anya. Achọpụtara m ọdịiche dị n'etiti ịhụnanya (centrifugal) na agụụ mmekọahụ (centrifugal). Mgbe ahụ, achọpụtara m ọdịiche dị n'etiti ịhụnanya mmetụta uche na nke ọgụgụ isi, anyị wee hụ na Maimonides chọrọ inwe ọgụgụ isi na ọgụgụ isi kama ịhụnanya mmetụta uche. Nkọwa dị na paragraf ikpeazụ nwere ike ịkọwa ihe kpatara ya.
Mgbe ịhụnanya nwere mmetụta uche, ọ na-enwekarị akụkụ centripetal na ya. Mgbe m nwere mmetụta siri ike nke ịhụnanya mmetụta uche maka otu onye, ​​mgbe ahụ omume m na-eme iji merie ya nwere akụkụ nke na-amasị m. Ana m akwado mmetụta uche m ma chọọ imeju enweghị mmetụta mmetụta uche m na-enwe ma ọ bụrụhaala na enwetabeghị m ya. Ọbụlagodi na ọ bụ ịhụnanya na ọ bụghị agụụ, ọ bụrụhaala na ọ nwere akụkụ mmetụta uche ọ gụnyere ntụzịaka abụọ nke ime ihe. Ana m arụ ọrụ ọ bụghị naanị maka onye m hụrụ n'anya ma ọ bụ onye m hụrụ n'anya, kamakwa maka onwe m. N'ụzọ dị iche, ịhụnanya echiche dị ọcha na-enweghị akụkụ mmetụta uche, bụ site na nkọwapụta ihe omume sentrifugal dị ọcha. Enweghị m ụkọ na anaghị m egbochi mmetụta uche n'ime m na m ga-akwado ha, ma na-arụ ọrụ naanị n'ihi ndị a hụrụ n'anya. Ya mere ịhụnanya dị ọcha bụ ọgụgụ isi, ịhụnanya platonic. Ọ bụrụ na a na-emepụta mmetụta n'ihi ya, ọ nwere ike ọ gaghị afụ ụfụ, ma ọ bụrụhaala na ọ bụ ya kpatara na ọ bụghị akụkụ nke ihe kpatara na mkpali maka omume m.
Iwu nke ịhụnanya
Nke a nwere ike ịkọwa ajụjụ gbasara otu mmadụ nwere ike isi nye ihunanya Chineke iwu, na ịhụnanya n'ozuzu ya (enwekwara iwu ahụ ịhụ obi ụtọ na ịhụnanya nke onye bịara abịa). Ọ bụrụ na ịhụnanya bụ mmetụta, ọ na-ebilite na mmuo nke na-abụghị nke m. Ya mere, gịnị ka e nyere n'iwu ịhụ n'anya pụtara? Ma ọ bụrụ na ịhụnanya sitere n'iche echiche, ọ bụghịkwa mmetụta mmetụta uche, mgbe ahụ ọ dị ohere ijikọ ya.
N'okwu a, ọ bụ naanị nkwupụta na enwere ike igosi na iwu niile na-emetụta mmetụta uche dị ka ịhụnanya na ịkpọasị adịghị atụgharị na mmetụta uche kama n'echiche ọgụgụ isi anyị. Dịka ọmụmaatụ, R. Yitzchak Hutner wetara ajụjụ a jụrụ ya ka Maimonides si depụta iwu ịhụ Hega n'anya n'ime kworum anyị, ebe ọ gụnyere n'iwu nke ịhụ ịhụnanya n'anya. Hega bụ onye Juu, n’ihi ya, a ga-ahụrịrị ya n’anya n’ihi na ọ bụ onye Juu, gịnị ka e nyere n’iwu ịhụ Hega n’anya na-agbakwụnye? Ya mere, ọ bụrụ na m hụrụ onye ala ọzọ n'anya n'ihi na ọ bụ onye Juu dị ka m hụrụ onye Juu ọ bụla n'anya, edebebeghị m iwu ịhụ onye ala ọzọ n'anya. Ya mere, RIA na-akọwa, ọ dịghị mbiputegharị ebe a, na onye ọ bụla mitzvah nwere nke ya ọdịnaya na ụdị nke ịdị adị.
Nke a pụtara na iwu ịhụ Hega n'anya bụ nke ọgụgụ isi na ọ bụghị nke mmetụta uche. Ọ gụnyere mkpebi m ịhụ ya n'anya n'ihi ihe ndị dị otú ahụ na nke dị otú ahụ. Nke a abụghị ịhụnanya kwesịrị ịkụnye n'ime m n'onwe ya. Ọ dịghị ihe ọ bụla maka otu banyere nke a, dị ka mitzvos na-amasị mkpebi anyị ma ọ bụghị mmetụta uche anyị.
Ozizi Chazal banyere ihunanya ọñụ na-edepụta mkpokọta omume anyị ga-emerịrị. Ma otu a ka Maimonides si tinye ya na mmalite nke amaokwu nke anọ nke Onye-nwe, mana:
Mitzvah mere okwu ha ileta ndị nrịanrịa, na-akasi ndị na-eru uju obi, na-ebupụ ndị nwụrụ anwụ, na-akpọbata nwunye ọhụrụ, na iso ndị ọbịa, na-emekọ ihe niile mkpa olili, na-ebu n'ubu, na lilac n'ihu ya na. Iru újú ma gwuo ala ma lie, ma ṅụrịa ọṅụ n'alụmdi na nwunye, Shiur, n'agbanyeghị na ihe ndị a nile sitere n'okwu ha, ha nọ n'ozuzu ma hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị, ihe niile ị chọrọ ka ndị ọzọ mee gị, gị. me ha ka ha buru nwa-nne-unu nime Tora na Matza.
Ọzọkwa, ọ dị ka mitzvah nke ịhụnanya ịhụnanya abụghị maka mmetụta uche kama ọ bụ maka omume.
Nke a pụtakwara n'amaokwu dị na parsha anyị nke na-ekwu:
Mgbe niile, na mgbe ahụ, na otú Otú ọ dị,
Ịhụnanya na-atụgharị n'omume. Ya mere, ọ dị n'amaokwu ndị dị na Parashat Akev (a na-akpọ izu na-abịa. Deuterọnọmi XNUMX: XNUMX):
I gāhu kwa Chineke nke Chineke-gi n'anya, debe kwa ihe-ndebe-Ya, na ukpuru-Ya nile, na ikpé-Ya nile, na ikpé-Ya nile, ubọchi nile;
Ọzọkwa, Sages na-achọkwa amaokwu ndị dị na parsha anyị gbasara ihe ọ pụtara (Brachot SA AB):
Na steeti ọ bụla - Tanya, R. Eliezer na-ekwu, ọ bụrụ na a na-ekwu n'ime mkpụrụ obi gị dum ihe mere e ji kwuo ya n'ala gị nile, na ọ bụrụ na a na-ekwu n'ala gị nile ihe mere e ji kwuo na mkpụrụ obi gị nile, ọ gwụla ma ị nwere. onye ahu ya n'anya , Nke a na-ekwu na niile madad.
Ịhụnanya ọ̀ na-amasị ihe ma ọ bụ aha ya?
N'akwụkwọ nke ụgbọ ala abụọ na balloon n'ọnụ ụzọ nke abụọ m dị iche n'etiti ihe ahụ na njirimara ya ma ọ bụ aha ya. Tebụl dị n'ihu m nwere ọtụtụ atụmatụ: ejiri osisi mee ya, ọ nwere ụkwụ anọ, ọ dị ogologo, dị mma, agba aja aja, gburugburu na ndị ọzọ. Ma gịnị bụ tebụl n'onwe ya? Ụfọdụ ga-ekwu na tebụl abụghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị nchịkọta atụmatụ a (nke a bụ eleghị anya ihe onye ọkà ihe ọmụma bụ Leibniz chere). N'akwụkwọ m n'ebe ahụ, m rụrụ ụka na nke a abụghị eziokwu. Tebụl bụ ihe ọzọ ma e wezụga nchịkọta atụmatụ. Ọ ka mma ịsị na o nwere àgwà ndị ahụ. Àgwà ndị a bụ àgwà ya .
Ọ bụrụ na ihe abụghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị nchịkọta ihe, mgbe ahụ ọ dịghị ihe mgbochi ịmepụta ihe site na nchịkọta ihe ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ nri nke nkume jed na mkpịsị aka nke otu onye nwere square nke tebụl n'akụkụ m na ikuku nke igwe ojii cumulonimbus n'elu anyị ga-abụkwa ihe ziri ezi. Gịnị mere? N'ihi na ọ dịghị ihe nwere ihe ndị a niile. Ha bụ nke ihe dị iche iche. Ma ọ bụrụ na ihe abụghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị nchịkọta nke ihe onwunwe, mgbe ahụ ọ gaghị ekwe omume ikwu otú ahụ. Nkwubi okwu bụ na ihe abụghị mkpokọta ihe onwunwe. Enwere nchịkọta atụmatụ na-egosi ya.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile a na-ekwu banyere ihe, dị ka tebụl, ga-abụ nkwupụta gbasara ihe onwunwe ya. Mgbe anyị na-ekwu na ọ bụ aja aja ma ọ bụ osisi ma ọ bụ ogologo ma ọ bụ dị mma, ndị a niile bụ njirimara ya. Ọ ga-ekwe omume ikwu okwu na tebụl n'onwe ya (ọkpụkpụ ya)? Echere m na enwere okwu ndị dị otú ahụ. Dịka ọmụmaatụ, nkwupụta na tebụl dị. Ịdị adị abụghị akụkụ nke tebụl kama ọ bụ arụmụka gbasara tebụl n'onwe ya. N'ezie, nkwupụta m sitere n'elu na e nwere ihe dị ka tebụl karịrị nhazi nke atụmatụ bụ nkwupụta na tebụl dị, ma o doro anya na ọ na-ejikwa ya ma ọ bụghị nanị na njirimara ya. Echere m na ọbụna nkwupụta na tebụl bụ otu ihe ma ọ bụghị abụọ bụ nkwupụta banyere onwe ya ma ọ bụghị nkọwa ma ọ bụ njirimara ya.
Mgbe m na-ekwu banyere ọdịiche a afọ gara aga, otu n'ime ụmụ akwụkwọ m kwuru na n'echiche ya, ịhụnanya maka mmadụ na-atụgharịkwa n'ọkpụkpụ nke onye hụrụ ya n'anya, ọ bụghị n'àgwà ya. Àgwà bụ ụzọ isi zute ya, ma mgbe ahụ ịhụnanya na-atụgharị na onye nwere àgwà ọ bụghị n'àgwà, ya mere ọ nwere ike ịdị ndụ ọbụna ma ọ bụrụ na àgwà ndị ahụ gbanwere n'ụzọ ụfọdụ. Ikekwe nke a bụ ihe ndị amamihe kwuru na Pirkei Avot: Na ịhụnanya niile nke na-adabereghị n'ihe ọ bụla - ghara imebi ihe ọ bụla ma wepụ ịhụnanya."
Nkọwa ọzọ maka mmachibido iwu nke ọrụ mba ọzọ
Foto a nwere ike ime ka mmachibido ndị ọrụ si mba ọzọ pụta ìhè. Na parsha anyị (na m ga-arịọ) Torah na-agbatị mmachibido nke ọrụ mba ọzọ. Haftarah (Aisaia isi M) dịkwa gbasara akụkụ nke ọzọ, enweghị mmezu nke Chineke:
Nhmo Nhmo Ami Iamr gi Gd: Dbro on hearted Iroslm na Krao Alih Ci forth Tzbah Ci Nrtzh Aonh Ci Lkhh Mid Ikok Cflim Bcl Htatih: S. Cole agụ wilderness Fno Drc Ikok Isro Barbh Mslh Lalhino: Cl Giamount Insa na Chl . na Hih Hakb Lmisor na Hrcsim Lbkah : Virtzer Majeker: Nadshading igbu ya n'ime ime ụlọ Irah Bzrao Ikbtz Tlaim na Bhiko Isa Alot Inhl: S. Onye Mdd Bsalo mmiri na Smim Bzrt Tcn na Cl Bsls Afr ụwa na Skl Bfls Hrim na Gbaot Bmaznim: Onye Tcn Na ifufe Ikok na Ais Atzto Iodiano: Onye Noatz na Ibinho na Ilmdho Barh Msft na Ilmdho amamihe na Drc Tbonot Iodiano: ay Goim Cmr Mdli na Cshk Maznim Nhsbo ay Aiim Cdk Itol: na Lbnon enweghi Di Bar na Hito enweghi Di Aolh: S Cl Hgoim Cain Ngdo Mafs na Tho Nhsbo nye ya: na Al Who Tdmion chi na Mh Dmot Tarco nye ya: Hfsl Nsc omenkà na Tzrf Bzhb Irkano na Rtkot ọlaọcha ọla edo: Hmscn The nnukwu oge ịga ụwa. Th Cdk eluigwe na Imthm Cahl Lsbt: Hnotn Roznim Lain Sfti land Ctho Ash: iwe Bl Ntao iwe Bl Zrao iwe Bl Srs Bartz Gzam Otu na Nsf Bhm na Ibso na Sarh Cks Tsam: S. Al Who Tdmioni na Asoh Iamr nsọ: Sao pepe Ainicm na Rao Who Bra Ndia bu Hmotsia N'ọnu-ọgugu usu-ndi-agha-ha nye madu nile n'aha Onye-nwe-ayi ọ gākpọ kwa ọtutu n'ime ha ma nwe obi ike ike nke madu ọ dighi onye nādighi:
Isiakwụkwọ a na-ekwu maka eziokwu ahụ bụ na Gd enweghị ọdịdị ahụ. Ọ gaghị ekwe omume idezi ya agwa ma jiri ya tụnyere ihe ọzọ anyị maara nke ọma. Yabụ kedu ka ị ka si akpọtụrụ ya? Kedu otu esi enweta ya ma ọ bụ mata na ọ dị? Amaokwu ndị a na-aza nke a: naanị na ọgụgụ isi. Anyị na-ahụ ihe ndị o mere, anyị na-ekwukwa na ọ dị adị nakwa na ọ dị ike. Ọ na-emepụta ụlọ ọrụ nke ala (kere ụwa) na-anọdụ ala na gburugburu nke ala (na-agba ya). "Lee onye kere ndị na-emefu na ọnụ ọgụgụ nke ndị agha ha maka mmadụ niile n'aha Yikra."
N'ihe gbasara akụkụ nke gara aga, enwere ike ịsị na Gd enweghị ụdị, ya bụ, ọ nweghị njirimara nke anyị ghọtara. Anyị anaghị ahụ ya, anyị anaghị ahụkwa ahụmihe mmetụta ọ bụla gbasara ya. Anyị nwere ike nweta nkwubi okwu site na omume ya (na okwu nke nkà ihe ọmụma intervening, o nwere utu aha na ọ bụghị ihe utu aha).
Enwere ike ịmepụta ịhụnanya mmetụta uche n'ebe ihe na-ere anyị ozugbo, nke anyị na-ahụ ma ọ bụ na-ahụ ya. Mgbe ahụmahụ ahụ na ahụmahụ na-ahụ anya kpọmkwem, ịhụnanya nke na-ebilite nwere ike ịtụgharị na ọkpụkpụ, ma nke a chọrọ mgbasa ozi nke aha na njirimara nke onye a hụrụ n'anya. Site na ha ka anyị na ya na-ezute. Ya mere, ọ na-esi ike ịrụ ụka na e nwere ịhụnanya mmetụta uche n'ebe ihe dị n'akụkụ nke anyị na-enweta nanị site n'esemokwu na echiche ọgụgụ isi, na anyị enweghị ụzọ isi mee ka anyị na ya nwee kọntaktị ozugbo. Echere m na ụzọ ịhụnanya ọgụgụ isi ghere oghe nye anyị ebe a tumadi.
Ọ bụrụ otú ahụ, ọ bụghị ihe ijuanya na parsha na haftarah na-emeso abstraction nke Chineke, ma ọ bụrụ na parsha na-eweta iwu ịhụ ya n'anya. Mgbe internalizing abstraction nke Chineke, nkwubi okwu doro anya bụ na ịhụnanya maka Ya kwesịrị na nwere ike ịbụ naanị na ọgụgụ isi ụgbọ elu ọ bụghị na mmetụta uche ụgbọelu. Dị ka ekwuru, nke a abụghị ihe ọjọọ ebe ọ bụ na dịka anyị hụworo na ọ bụ kpọmkwem ịhụnanya kachasị dị ọcha na nke zuru oke nke mmadụ niile. O kwere omume na ịhụnanya a ga-emekwa ka ọ nwee mmetụta ịhụnanya n'ebe ọ nọ, ma nke a bụ ihe mgbakwunye. Akụkụ na-abaghị uru nke ịhụnanya ọgụgụ isi nke Chineke. Mmetụta dị otú ahụ enweghị ike ịbụ isi ihe na-akpalite ebe ọ bụ na ọ nweghị ihe ọ ga-ejide. Dị ka m kwuru, a na-ahụ mmetụta ịhụnanya n'oyiyi nke onye a hụrụ n'anya, ọ dịghịkwa adị na Chineke.
Ikekwe akụkụ ọzọ nwere ike ịhụ ebe a na mmachi nke ọrụ mba ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ na-emepụta ihe oyiyi maka Chineke, na-agbalị ime ka ọ ghọọ ihe a na-aghọta nke ọma nke nwere ike ịmepụta njikọ uche kpọmkwem, mgbe ahụ ịhụnanya maka ya nwere ike ịghọ mmetụta mmetụta uche, nke nwere àgwà centripetal nke na-etinye onye hụrụ n'anya karịa onye ọ hụrụ n'anya. etiti. Ya mere Gd na-achọ n'ime haftarah anyị ime ime na ọ dịghị ụzọ isi ṅomie ya (ime ka ọ bụrụ àgwà ọ bụla), na ụzọ isi ruo ya bụ nkà ihe ọmụma-ọgụgụ isi, site n'echiche. Ya mere, ịhụnanya maka ya, nke ihe omume ahụ na-emetụta, ga-enwekwa àgwà dị otú ahụ.
Echere m na e nwere ihe ole na ole nke ọrụ mba ọzọ na echiche okpukpe nke ọtụtụ n'ime anyị. Ndị mmadụ na-eche na ọrụ okpukpe oyi na-atụ bụ ihe ọjọọ, ma ebe a agbalịrị m igosi na ọ nwere akụkụ zuru oke ma dị ọcha. Ịhụnanya mmetụta uche na-adaberekarị n'ụfọdụ ihe atụ nke Chineke, n'ihi ya, ọ nwere ike na-ata ahụhụ site na ngwa ofufe ya nke mba ọzọ. Agbalịrị m ịrụ ụka ebe a na-akwado tesis na ịhụnanya nke Chineke kwesịrị ịbụ nke platonic, ọgụgụ isi na nkewapụ n'ụzọ mmetụta uche.
 Ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na amygdala Livaị emebi, ọ ga-esi ezigbo ike, ma eleghị anya ọ gaghị ekwe omume ịghọta ihe o mere. Ọ ghọtaghị ihe mmerụ ahụ nke mmetụta uche bụ na ihe mere o ji na-ewute Saịmọn. Ya mere mmerụ ahụ amygdala nwere ike ọ gaghị ekwe ka ọ ghọta ihe omume ya pụtara, ọ gaghịkwa eche na ya kwesịrị ịrịọ mgbaghara. Ma ọ dị mkpa ịghọta na nke a bụ ọrụ dị iche iche nke amygdala, nke na-adịchaghị mkpa n'ọnọdụ anyị. Arụmụka m bụ na ọ bụrụ n'ụzọ doro anya ọ ghọtara na o mejọrọ Saịmọn ọbụna ma ọ bụrụ na ọ dịghị emekpa ya ahụ, arịrịọ maka mgbaghara zuru oke ma dị ọcha. Mmetụta ya adịchaghị mkpa. Ọ bụ ezie na n'ụzọ nkà na ụzụ na-enweghị mmetụta dị otú ahụ, ọ gaghị eme ya n'ihi na ọ gaghị aghọta mkpa omume ahụ na ihe ọ pụtara. Mana nke a bụ naanị teknụzụ. Ọ nwere ike jikọta na mmeghe m na ọ bụ uche na-eme mkpebi, ọ na-ewerekwa mmetụta uche dị ka otu n'ime ihe ndị a ga-atụle.
Ọ na-echetara m okwu nkuzi m nụrụ na TED n'otu oge site n'aka onye na-ahụ maka akwara ozi nke ụbụrụ mebiri emebi na enweghị ike inwe mmetụta. Ọ mụtara iṅomi omume mmetụta uche ndị a na teknụzụ. Dị ka John Nash (nke a maara maka akwụkwọ Sylvia Nasser, Wonders of Reason, na ihe nkiri na-esote), bụ onye nwere ahụmahụ gburugburu ebe obibi mmadụ ma mụta ileghara ya anya n'ụzọ zuru oke. O kwenyesiri ike na e nwere ndị gbara ya gburugburu n'ezie, ma ọ mụtara na ihe ndị a bụ ihe efu na o kwesịrị ileghara ha anya n'agbanyeghị na ahụmahụ ahụ ka dị n'ime ya n'ụzọ zuru ezu. Maka ebumnuche nke nkwurịta okwu anyị, anyị ga-eche Levy dị ka amygdala na-enweghị ikike mmetụta mmetụta uche, onye mụtara ịghọta na ọgụgụ isi na oyi (na-enweghị mmetụta) na omume dị otú ahụ ma ọ bụ ndị ọzọ na-emerụ ndị mmadụ ahụ, na a ghaghị ịchọ mgbaghara iji mee ka obi dị ha mma. Ka e were ya na ịrịọ mgbaghara na-esiri ya ike dị ka onye na-eche echiche, ma ọ bụghị ya, a pụrụ ịrụ ụka na e kwesịghị inwe ekele maka omume dị otú ahụ ma ọ bụrụ na ọ dịghị anara onye na-eme ya ọnụ ahịa uche.
 Lee nke a n’ụzọ zuru ezu n’akwụkwọ nke iri na otu na Talmudic Logic Series, The Platonic Character of the Talmud, Michael Avraham, Israel Belfer, Dov Gabay na Uri Shield, London 2014, na akụkụ nke abụọ.
 Maimonides na mgbọrọgwụ ya na-ekwu na okpukpu abụọ mitzvot na-adịghị emeghari ihe karịrị mitzvah nke onye ọzọ debanyere aha ekwesịghị ịhọpụta.
 Ma ọ bụghị otu ihe ahụ e nyere n'iwu ịhụ ntozu okè nke ya n'anya. Lee okwu anyị n'ebe ahụ.
 Ọ bụ ezie na ihe ndị a bụ iwu sitere n'okwu ndị odeakwụkwọ, ma na-ekwu na iwu Dauriyta bụ ee na mmetụta uche, ma onye na-eme ihe ndị a n'ihi ịhụnanya o nwere n'ebe mmadụ ibe ya nọ na-emezukwa n'ime nke a Mitzvah Daurita. Ma ọ dịghị ịgọnarị asụsụ Maimonides ebe a iji ghọta na ọbụna Dauriyta mitzvah nke na-ekwu banyere mmekọrịta iji too nwere ike ịbụ nke uche na ọ bụghị mmetụta uche dị ka anyị kọwara ebe a.
 Dị ka m kọwara n'ebe ahụ, ihe dị iche a metụtara ọdịiche nke Aristotelian n'etiti ihe na okwu ma ọ bụ ihe na ọdịdị, na nkà ihe ọmụma Kant na ihe dị iche n'etiti ihe ahụ n'onwe ya ( nuumana ) ikwu okwu dị ka ọ na-apụta n'anya anyị (ndị ahụ) phenomen).
 Lee ebe ahụ ihe atụ m nyere site na ọgụgụ isi akụkọ nke onye edemede Argentine Borges, "Ochber, Telen, Artius", na dunes nke Yoram Bronowski sụgharịrị.
 Egosiwo m n'ebe ahụ na enwere ike ị nweta ihe akaebe site na arụmụka ontological maka ịdị adị nke Chineke. Ọ bụrụ na ịdị adị nke ihe ahụ bụ àgwà ya, n'ihi na mgbe ahụ, ịdị adị nke Chineke nwere ike pụta ìhè n'echiche ya, nke a na-atụghị anya ya. Ọ bụ ezie na lee nkọwa zuru ezu nke arụmụka a na akwụkwọ ndetu mbụ na saịtị ahụ. N'ebe ahụ, agbalịrị m igosi na arụmụka ahụ abụghị ihe ndabere (ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa).
Ntụgharị uche na-eso ọpụpụ nke R. Binyamin David Levy nwụrụ anwụ (kọlụm 124)
Darush, ose, ịhụnanya nke Israel na omume ọma ya (Osisi 52)
Abụ nke Ala ahụ m hụrụ n'anya: Nlele mara mma na nkuzi ala nna (Column 153)
16 Echiche Ndị Dị na “Na Ịhụnanya: N’etiti Mmetụta na Uche (Okwu nke 22)”
30 Tishri 10 - 2016/12/11 na XNUMX:XNUMX
Gịnị ka 'ịhụnanya ọgụgụ isi' pụtara, ebe ọ bụ na ịhụnanya bụ mmetụta uche?
Ma ọ bụ nke a ọ bụ mmejọ na ọ pụtara n'ezie ntụaka na njikọ nke onye ọzọ - na site na 'echiche' ebumnuche abụghị maka nghọta nyocha kama maka n'uche nke ahụ bụ ihe ziri ezi ime?
Ma gbasara ilu sitere na ịhụnanya, ọ nwere ike ọ gaghị apụta na ịhụnanya bụ mmetụta uche, mana isi ihe dị n'ilu ahụ bụ eziokwu ahụ bụ na mmadụ 'enweghị ike' ọ bụghị mgbe niile ka ọ na-emehie. Eleghị anya ọ bụ eziokwu na echiche a 'na-emeri' mmadụ niile ọ na-enwu…
Esemokwu m bụ na ọ bụghị. Mmetụta mmetụta kachasị bụ ihe ịrịba ama nke ịhụnanya ọ bụghị ịhụ onwe ya n'anya. Ịhụnanya n'onwe ya bụ mkpebi nke ezi uche, ma e wezụga na ọ bụrụ na mmetụta ahụ bilitere mgbe ahụ enwere m ike ikpebi.
Ahụghị m ihe ọ pụtara ịbụ nyocha. Nke a bụ mkpebi na nke a bụ ihe ziri ezi ime, dị ka Maimonides dere n’amaokwu nke abụọ.
Ọ bụrụ na ilu ahụ abịaghị ịkọwa ọrụ m, gịnị bụ isi okwu ya? Ọ na-agwa m ihe ga-eme m site n'onwe ya? O yikarịrị ka ọ bịara ịkọwa ihe ọ bụ ọrụ m ime.
30 Tishri 10 - 2016/12/13 na XNUMX:XNUMX
O doro anya na e nwere ọdịiche dị n'etiti 'ọrụ sitere n'ịhụnanya' nke onye rabaị kwuru banyere post, na 'mitzvot ahavat ha' (nke Maimonides na-ekwu banyere iwu nke Jizọs)….
Na Halachot Teshuvah Maimonides na-ekwu maka ihe na-eweta Eden ife aha ahụ - na n'ezie okwu nke rabaị na-eme ka o doo anya…
Ma site n'ịbụ onye mitzvah, mitzvah nke ịhụnanya nke Gd adịghị emeso ihe na-eweta mmadụ ịrụ ọrụ, kama ọ dị ya mkpa ịmalite (dị ka okwu Hagli Tal - ọṅụ nke na-emepụta ọkara nke ọrụ) ... Na-ekiri ihe okike
kwenye kpamkpam. Nke a bụ n'ezie mmekọrịta dị n'etiti iwu ndị bụ isi nke Torah na Teshuvah. Ma na H. Teshuvah ọ kọwapụtara ịhụnanya na ime eziokwu n'ihi na ọ bụ eziokwu. Kedu ihe dị n'etiti nke ahụ na mmetụta? O yikarịrị ka ịhụnanya nke ebe abụọ ahụ jikọtara ya na ya bụ otu ịhụnanya. Na Basic Torah o dere na a na-enweta ịhụnanya site n'ịhụ ihe e kere eke (nke a bụ okwu m na-ekwu banyere ya), na Teshuvah ọ na-akọwa na ihe ọ pụtara n'ihe banyere ịrụ ọrụ site n'ịhụnanya bụ ime eziokwu n'ihi na ọ bụ eziokwu. . Ma ha bụ okwu m.
Echiche nke egwu dị iche n'etiti Yeshiva na Halachot Teshuvah
Nke a bụ nnọọ iju mgbagha. Mgbe ị na-ekwu maka ịrụ ọrụ iji nweta ego na ikwu maka ịzụrụ ihe site na ego, okwu ahụ bụ "ego" ọ pụtara n'ụzọ dị iche iche? Ya mere, gịnị mere mgbe ị na-ahụ ịhụnanya ma ọ bụ mgbe ị na-eme ihe n'ihi ịhụnanya, okwu ahụ bụ "ịhụnanya" pụtara n'ụzọ abụọ dị iche iche?
N'ihe gbasara egwu, a ga-atụlekwa njikọ dị n'etiti ịtụ egwu ibuli elu na egwu ntaramahụhụ. Ọ bụrụ na ejiri otu echiche ahụ, ọ ga-enwe otu ihe pụtara, ma ọ bụ obere nwere njikọ zuru oke n'etiti nkọwa ya. N'okwu abụọ ahụ egwu bụ otu ihe, ihe dị iche bụ na ajụjụ nke ihe na-akpalite egwu, ntaramahụhụ ma ọ bụ ibuli elu.
Nkọwa dị na Halacha C na-ada m ntakịrị ntakịrị.
Ọ na-esiri ike iwepụ akụkụ ahụmahụ na okwu Maimonides na-ekwu na ọ na-adọ aka ná ntị nanị maka "iwepụ Torah." N'ezie ọ dị ka ọ na-akọwa ahụmahụ miri emi nke onye hụrụ Chineke n'anya na nanị ihe dị n'ụwa nke na-eche banyere ya bụ ịhụ Chineke n'anya. Anaghị m ekwenye ma ọlị na echiche nke isiokwu ahụ na ahụmahụ mmetụta uche na-etinye onye hụrụ n'anya n'etiti ma naanị ịhụnanya dịpụrụ adịpụ na-etinye onye a hụrụ n'anya na etiti. Ọ dị m ka ọ dị ọkwa dị elu karịa nkewapụ oyi na ọ bụ mgbe ọchịchọ nke onye hụrụ n'anya jikọtara ya na ọchịchọ nke onye ọ hụrụ n'anya na mmezu nke ọchịchọ nke onye ahụ hụrụ n'anya na-aghọ mmezu nke ọchịchọ nke onye hụrụ n'anya na nke ọzọ. n'ihe gbasara "mee uche gị ka ọ masịrị". N'ịhụnanya a, ọ gaghị ekwe omume ikwu banyere onye hụrụ n'anya ma ọ bụ onye a hụrụ n'anya n'etiti mana banyere otu ọchịchọ nkịtị maka ha abụọ. N'uche nke m, Maimonides na-ekwu maka nke a mgbe ọ na-ekwu maka ọchịchọ nke onye hụrụ Chineke n'anya. Ọ dịghị emegide ime eziokwu n’ihi na ọ bụ eziokwu nke pụrụ isite n’ọchịchọ maka eziokwu ahụ.
1. N'anya m ọ dịghị ka ihe siri ike. M kwuru na ezi omume nke ilu.
2. Echiche dị na isiokwu ahụ abụghị na ahụmahụ mmetụta uche na-etinye onye hụrụ n'anya n'etiti, ma na ọ na-enwekarị akụkụ dị otú ahụ (ọ na-etinye aka).
Okwu gbasara mkpakọrịta omimi a siri m ike nke ukwuu ma echeghị m na ọ bara uru, karịsịa ọ bụghị n'ebe ihe na-adịghị anya na nke a na-apụghị ịhụ anya dị ka Chineke, dịka m dere.
4. Ọ bụrụgodị na o nwere ike ọ gaghị emegide ime eziokwu n’ihi na ọ bụ eziokwu, ma ọ bụghị otu ihe ahụ n’ebe ọ nọ. Maimonides ji ịhụnanya mata nke a.
30 Tishri 10 - 2016/12/14 na XNUMX:XNUMX
Dị ka ọ dị na mbụ, na-adọrọ mmasị ma na-eche echiche.
N'otu oge ahụ, ihe ọ pụtara na Maimonides abụghị naanị 'nhụjuanya dị nta', ma ọ bụghịkwa nnukwu ngwa ngwa, ọ bụ naanị mgbagha (na mgbaghara). Maimonides mere ike ya niile iji kọwaa ọnọdụ mmetụta uche, na ị na-amanye ya ka ọ kwuo na ọ ka bụ ihe ezi uche dị na ya na nkewapụ (dị ka ị na-akọwa ya) [na okwu banyere 'ọdịda' n'ihe gbasara ilu adịghị ekweta ma ọlị na anyị. N'okwu ya, n'ihi na ebe a abụghị naanị ileghara ilu anya].
Banyere ajụjụ n'ozuzu banyere ihe dị mkpa nke mmetụta uche, ekwesịrị iburu n'uche na mmetụta ọ bụla sitere na ụfọdụ nghọta echiche. Ụjọ agwọ sitere n’ihe anyị ma na ọ dị ize ndụ. Nwatakịrị agaghị atụ egwu iji agwọ egwu egwu.
Ya mere ọ bụ ihe na-ezighi ezi ikwu na mmetụta uche bụ naanị ihe ebumpụta ụwa. Bụ mmuo nke na-arụ ọrụ n'ihi ụfọdụ nghọta. Ya mere, onye na-abụghị ụbụrụ mebiri emebi, na enweghị mmetụta ọ bụla na-ebilite n'ime ya na-esochi imerụ onye ọzọ ahụ, ọ na-apụta na nghọta omume ya nwere ntụpọ.
N'uche nke m, nke a bụkwa ebumnuche Maimonides. Ka mmadụ na-amata eziokwu ahụ, otú ahụ ka mmetụta ịhụnanya na-adịkwa n’obi ya. Ọ dị m ka ihe doro anya ma emechaa na isiakwụkwọ (Halacha XNUMX):
Ọ bụ ihe a maara na nke doro anya na ịhụnanya Chineke adịghị ejikọta n'ime obi mmadụ - ruo mgbe ọ na-enweta ya mgbe niile nke ọma wee hapụ ihe niile dị n'ụwa ma e wezụga ya, dị ka o nyere iwu wee sị 'ji obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum. '- ma na echiche ọ maara. Ma dị ka echiche ahụ si dị, a ga-enwe ịhụnanya, ma ọ bụrụ na ntakịrị ntakịrị ma ọ bụrụ na ọ dị ukwuu. "
Nke doro anya ebe a: a. Ịhụnanya bụ mmetụta na-ekekọta n'ime obi mmadụ.
B. Iwu dị na Torah bụ gbasara mmetụta uche.
nke atọ. Ebe mmetụta a bụ ihe si n'uche pụta.
Ihe iwu ahụ ịhụ Chineke n’anya pụtara bụ ịmụba n’uche nke Chineke.
Ahụghị m n'okwu Maimonides ebe a na ọ bụ mmetụta uche. Ọ bụ nsụhọ ma ọ bụchaghị mmetụta mmetụta. Ị na-elegharakwa mmekọrịta dị n'etiti B na C nke m kwadoro na nkwupụta m.
Ma karịa ihe a niile, enweghị m nsogbu n'ụkpụrụ na okwu gị, n'ihi na ọbụna na usoro gị ka ọrụ dị anyị n'aka bụ ọrụ ọgụgụ isi, ịmara na ịmara, ọ bụghị mmetụta uche. Mmetụta ma ọ bụrụ na e kere ya n'ihi - a ga-emepụta ya, ma ọ bụrụ na ọ bụghị - mgbe ahụ ọ bụghị. Ya mere mmetụta mmetụta na-ebilite na njedebe na-enweghị njikwa anyị. Ozi na mmụta dị anyị n'aka, na mmetụta uche bụ na kacha pụta. Yabụ kedu ihe dị iche n'ihe ị na-enye na ihe m dere?
A CPM maka onye ụbụrụ ya mebiri emebi na enweghị ike ịhụ n'anya. Ị chere na onye dị otú ahụ enweghị ike idebe iwu nke ịhụnanya Chineke? N'uche nke m ee.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị hotala halakhah a na-ajụ na Rambam, gịnị kpatara i jiri kwụsị ya? Nke a bụ asụsụ zuru ezu:
Amara na nke doro anya na ịhụnanya nke Onye Ngọzi anaghị ejikọta ya na obi mmadụ ruo mgbe ọ na-eme ya nke ọma ma hapụ ihe niile dị n'ụwa ma e wezụga ya, dịka o nyere iwu ma jiri obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum kwuo, obere na nke ukwuu, ya mere mmadụ ga-ejikọta ọnụ n'onwe ya aghọta ma kụziere ya amamihe na ọgụgụ isi na-agwa ya cono ya dị ka ike nke mmadụ nwere ịghọta na nweta dịka anyị hụworo na iwu ndị bụ isi nke Torah.
O doro anyị anya na nke a bụ echiche na ọ bụghị mmetụta uche. Na kacha mmetụta mmetụta bụ ihe sitere n'uche. Ọrụ ịhụ Chineke n'anya abụghị n'uche kama ọ dị n'uche. Na NPM maka ụbụrụ mebiri emebi.
Ma kedu ka ọ ga-esi kwe omume ịghara iji okwu Rabbi kwuchaa n'imezu ya ebe ahụ:
Ihe mara ma doo anya, wdg. AA bụ nzuzu anyị amaghị ihe mere o ji bụrụ ihe ntụzịaka, anyị na-atụgharịkwa ya n'okwu abụọ asụsụ uri dị ka ihe nzuzu nye Devid, ihe ọzọ maka ịhụnanya ya ga-emezu n'okwu gị nke ị gaghị akwụ ụgwọ. anya na ha
Ka ọ dị mma maka mgbede a.
1. N'uche nke m nkebi ahịrịokwu 'agbụ n'ime obi mmadụ' dabara adaba maka mmetụta uche karịa nsụhọ.
2. Mmekọrịta dị n'etiti B na C bụ ihe kpatara na mmetụta. Ya bụ: uche na-eduga n'ịhụnanya. Ịhụnanya na-ebute ọrụ n'aha ya (ọ bụghị ịhụnanya kama 'ọrụ sitere na ịhụnanya', ya bụ: ọrụ sitere na ịhụnanya).
Seder n'okwu Maimonides metụtara isiokwu ahụ - isiokwu ya abụghị iwu nke ịhụnanya Chineke (nke a bụ isiokwu na ntọala nke Torah) kama ọ bụ ọrụ Chineke, na mgbe ọ bịara ịkọwapụta ọrụ magburu onwe ya. ọ na-akọwa àgwà ya (aha ya - II) na isi iyi ya ), Ma mesịa kọwaa otú e si enweta ịhụnanya a (Da'at - HV).
A kọwara nke a n’okwu Maimonides na ngwụcha Halacha XNUMX: Mgbe ahụ na Halacha C na-akọwa ihe ịhụnanya kwesịrị ekwesị bụ.
3. Ọdịiche dị n'etiti okwu anyị bara nnukwu uru. N'uche nke m, ememe nke mitzvah dị na mmetụta uche, ya bụ: mmetụta ahụ bụ ihe dị mkpa na ọ bụghị ụfọdụ ngwaahịa na-adịghị mkpa. Onye na-ahụ 'Platonic' na nke kewapụrụ 'ịhụnanya maka Chineke' adịghị edebe mitzvah. Ọ bụrụ na ọ merụrụ ahụ na amygdala, a na-edina ya n'ike.
4. Aghọtaghị m ihe nhota sitere na n'ihu nke asụsụ Maimonides gbakwunyere
(Okwu ndị a "anaghị ahụ Onye Ngọzi n'anya [ma n'echiche ...]" adịghị apụta na mbipụta Frenkel, n'ihi ya, m na-ehotaghị ha, ma ihe ọ pụtara bụ otu. Ịhụnanya "dị ka okwu nke ụkpụrụ, ma ya bụ naanị maka idoanya, ebe a kwa ihe ọ pụtara bụ otu)
1. Ọ dị mma. Adịghị m n'aka maka nke ahụ.2. Ekwenyere m na ihe a niile. Ma ka na-eme eziokwu n'ihi na ọ bụ eziokwu adịghị ka m na-emetụta mmetụta ịhụnanya ma na a cognition mkpebi (ikekwe mmetụta ịhụnanya na-eso ya, ọ bụ ezie na ọ bụchaghị. See my previous post).
3. Ya mere, m na-ajụ ihe mere anyị ga-eji jikọta anyị maka ihe na-ebilite n'onwe ya? N'ikpeazụ, mitzvah bụ ime ka ihe ọmụma na ọrụ ọgụgụ isi dịkwuo omimi, na ịhụnanya nke na-ebilite mgbe nke ahụ gasịrị (ihe a gọziri agọzi ka onye kwere ekwe) bụ ihe na-egosi na i meela ya. N'ihi ya, onye obi ya mebiri emebi adịghị adina n'ike, kama ọ na-erube isi na mitzvah. Anyị enweghị ihe ịrịba ama nke a, ma Chineke maara na ọ kasị mma.
4. Nkwuta okwu sitere na n'aga n'ihu nke asụsụ Maimonides na-ekwu maka njirimara dị n'etiti ịhụnanya na ịmara, ma ọ bụ karịa na ịhụnanya bụ mmetụta dị n'akụkụ nke ịmara.
Ọ dị m ka anyị akọwaala ọnọdụ anyị nke ọma.
Naanị gbasara ajụjụ gị na-eme ugboro ugboro: ihe dị nnọọ mfe.
Chineke nyere anyị iwu ka anyị nwee mmetụta. Ee!
Ma gịnị bụ ụzọ isi mee ya? Ịba ụba echiche.
Ụdị ndị ọkà mmụta: ememe nke mitzvah - mmetụta uche, omume nke mitzvah - ọtụtụ echiche.
(Okwu Rabbi Solovitchik gbasara ụfọdụ mitzvos bụ ndị ama ama: ekpere,
Ma zaa, na ememe nke mitzvah dị n'ime obi).
Ọ bụrụ na ị dị njikere ịnakwere ya chepụtara ekwe omume 'na-eche banyere mmetụta uche
Nke anyị abụghị naanị site n'omume na echiche anyị, yabụ na ihe na-aghọta nke ọma na ọ bụghị ihe mgbagwoju anya.
Mgbe ahụ mmetụta uche abụghị naanị 'site-ngwaahịa' na-enweghị isi, kama ahụ nke mitzvah.
(Na nkọwapụta ebe a bụ okwu ndị ama ama nke Rab'a banyere enweghị anyaukwu.
N'ebe ahụ, ọ na-eji otu ụkpụrụ ahụ: Ọ bụrụ na uche gị bụ eziokwu,
N'ọnọdụ ọ bụla, mmetụta nke anyaukwu agaghị ebili)
Ị na-ekwu n'ezie na onye na-eme ihe dị ka ọgụgụ isi ma ọ bụghị dị ka mmetụta uche si dị bụ nanị onye nweere onwe ya, dịka ọmụmaatụ, ịhụnanya Chineke nwere ọgụgụ isi, ọ bụghịkwa mmetụta uche, ma ọ dị ka a pụrụ ikwu na dị ka mmadụ. onye na-egbochi mmetụta ya na-ejikọta ya na ha ma ọ bụghị onye nweere onwe ya otú ahụ ka onye na-eme ihe dị ka uche si dị na uche ya na-abụghị nke nnwere onwe, ị na-ekwukwa kpọmkwem banyere ịhụnanya na mmetụta ịhụnanya kachasị elu bụ mmetụta uche n'ihi na ọ bụ ya. ọgụgụ isi nke na-atụgharị na nke ọzọ ghara ịkwado mmetụta uche (onwe gị) mana ọgụgụ isi a na-akwadokwa onwe gị kedu ka ị dị iche na egocentrism n'etiti ikpe abụọ ahụ?
M na-echetara gị na ozugbo anyị na-ekwurịta okwu na-atọ gị ụtọ na mkparịta ụka na ị gwara m na ị kwesịrị ide banyere isiokwu na ọ bụ naanị onye na-eduzi ndụ ya dị ka Halacha bụ onye ezi uche, na banyere ihe pụrụ iche nke Talmud na Halacha na-ewere abstract echiche. ma hazie ha n'omume.
Enwere ike ịsị na uche na mmetụta uche bụ ọrụ abụọ dị iche iche nwere ọkwa nhata. Ma na a echiche mkpebi uche na-etinye aka ebe mmetụta uche bụ mmuo na-amanye m. Agbatịla m nke a na akwụkwọ sayensị nnwere onwe. daalụ maka ncheta ahụ. Ma eleghị anya, m ga-ede akụkọ banyere ya na saịtị ahụ.
Echere m na ọ ga-amasị gị http://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/med_and_physiol/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A8%D7%92%D7%A9-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%92%D7%99%D7%95%D7%9F
Enwere ọtụtụ mkparịta ụka ndị dị otú ahụ, na ọtụtụ n'ime ha niile na-ata ahụhụ site na mgbagwoju anya echiche (adịghị akọwapụta mmetụta uche na uche. Otú ọ dị, ọ nweghị ihe jikọrọ ya na okwu m n'ihi na ọ na-ekwu banyere ọrụ ụbụrụ na m na-ekwu banyere iche echiche. A na-eme echiche na-eche echiche na ya. uche na ọ bụghị ụbụrụ Ọ naghị eche n'ihi na ọ naghị ekpebi ime otú ahụ ma ọ dịghị "echeba ya echiche." Neuroscience na-eche na ọrụ ụbụrụ = iche echiche, nke a bụkwa ihe m dere na dịka nke a si kwuo, mmiri na-agba ọsọ na-etinye aka n'iche echiche. ọrụ.
26 Sivan 06 - 2019/20/42 na XNUMX:XNUMX
N’akụkụ na-esote nke akụkọ a na-ebo ebubo, T.S. M ga-egosi na brackets square:
"Nke ahụ bụ, ọṅụ na obi ụtọ adịghị ewepụ uru nke omume ahụ ma ọ bụrụhaala na ha ejikọta ya na ya dị ka mmetụta dị n'akụkụ. Ma ọ bụrụ na mmadụ amụta maka obi ụtọ na ọṅụ, ya bụ, ihe ndị ahụ bụ mkpali maka mmụta ya, ọ bụ ezie na ọ na-amụta ihe ọ bụghị maka onwe ya. N'ebe a, ha "ezighi ezi." N'okwu anyị, a na-ekwu na ihe ha mejọrọ abụghị na ha chere na e kwesịghị ime ọmụmụ ihe ahụ n'ụzọ [= centrifugal cell]. N'ụzọ megidere nke ahụ, ha ziri ezi. Ihe ha mejọrọ bụ na ịdị adị nke ihe ụtọ na ọṅụ na-egosi n'echiche ha na nke a bụ omume centrifugal [= centrifugal cell]. Ọ dịghị mkpa n'ezie. Mgbe ụfọdụ ihe ụtọ na ọṅụ bụ mmetụta uche nke na-abịa nanị n'ihi mmụta ma ghara ịbụ ihe kpatara ya.
2. "Nkwekọrịta" dị n'iwu abụọ dị n'akụkụ na Rambam gbasara ịhụnanya, yiri ka ọ kwụsịrị dị ka okwu nke igirigi beading nke ị wetara onwe gị ma e mesịa kọwaa ha na TotoD. Nke a bụ kpọmkwem ihe Maimonides kwuru n’ebe a banyere ịhụnanya Chineke. O nwere ihe kpatara uche, na nsonaazụ mmetụta uche. Ọ kọwakwara ịhụnanya ọ na-ekwu maka ya na Basic Laws of the Torah P.B. Ikiri ihe okike na nnabata nke amamihe na omume ọma nke Chineke. Ihe kpatara ama ama / uche - na-ebutekwa nsonaazụ mmetụta uche. Nke ahụ bụkwa ihe o kwuru ebe a.
26 Sivan 06 - 2019/20/57 na XNUMX:XNUMX
1. Ezigbo eziokwu. m doziri.
2. Ebe a ekwetaghị m. Ọ dị ka enweghị ọdịiche dị n'etiti halachah abụọ ahụ dịka Mahal Teshuvah siri kwuo.
'Ịhụnanya efu' - n'akụkụ ihe ahụ ma ọ bụghị n'akụkụ nke aha ya
16 nke Tammuz 07 - 2020/17/39 na XNUMX:XNUMX
N'iburu n'uche ọdịiche dị n'ebe a n'etiti ịhụnanya n'akụkụ ọkpụkpụ na ịhụnanya n'akụkụ aha - ọ ga-ekwe omume ịghọta echiche nke 'ịhụnanya efu' nke Rabbi Kook chepụtara.
Onwere ọnọdụ ebe agwa mmadụ ma ọ bụ ọchịchị ya dị oke egwu nke na ọ nweghị àgwà ọma ya a ga-enwe nke ga-akpalite mmetụta ịhụnanya n’ebe ọ nọ.
N'ọnọdụ dị otú ahụ, a pụrụ inwe nanị 'ịhụnanya n'ọkpụkpụ', ịhụnanya maka mmadụ nanị site n'ịdị mma nke ịbụ 'ihe mmasị nke onye e kere na B'Tselem' ma ọ bụ 'ihe na-amasị Israel nke a kpọrọ ụmụ nwoke n'ebe ahụ', onye ọbụna n'ọrụ ala nke 'ụmụ nwoke rụrụ arụ' ka a na-akpọ 'ụmụ nwoke', Ọtụtụ 'mebere nna' dị maka ụmụ ya nwoke.
Otú ọ dị, e kwesịrị ịrịba ama na ịhụnanya nna nwere n'ebe ụmụ ya nọ ọbụna n'ọnọdụ kasị daa ogbenye abụghị nanị 'ịhụnanya efu'. A na-edozikwa ya site n'olileanya na ihe ọma zoro ezo na ụmụ nwoke site n'ike - ga-abịakwa na-arụpụta. Okwukwe siri ike nke nna na ụmụ ya na nke Onye Okike n'ime ndị ya - nwere ike ime ka mmetụta ya dị mma, ya mere 'na-eweghachite obi ndị nna' nye ụmụ 'nwekwara ike iweta nlọghachi nke obi ụmụ' ndị nna ha.
Okwesiri iburu n'uche n'ebe a nkowa ohuru nke Bat-Galim Sha'ar (nne nke Gil-ad XNUMX) weputara n'echiche nke ' ihunanya efu'. Dị ka ya si kwuo, 'ịhụnanya efu' bụ 'ịhụnanya nke amara'. Ịchọta isi ihe dị mma n'ime ndị ọzọ - nwere ike ịkpalite ịhụnanya na-ada ada na iku ume ndụ n'ime mmekọrịta ahụ.
Na n'ezie ihe metụtara okwu nke Rabbi Nachman nke Breslav na Torah Rafev na 'Na-abụ abụ nye Elki mgbe m', mgbe ọ na-aṅụrị ọṅụ na 'ntakịrị ọzọ', na obere ọkụ nke ọma, ma ọ bụ karịa nke ọma: ntakịrị nke ahụ. na-anọgide n'ime mmadụ - na 'obere ìhè - na-achụpụ ọtụtụ ọchịchịrị'.
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 na 17:XNUMX
Ndị rabaị ga-eme ka m mara ihe dị iche n'etiti ịhụnanya mmetụta uche na agụụ agụụ m enweghị ike inwe mmetụta.
Tu B'Av 23 - 07/2021/17 na 42:XNUMX
Aghọtaghị m ajụjụ a. Ọdịiche dị n'etiti mmetụta abụọ a enweghị njikọ na okwu m. Onye ọ bụla kwenyere na ọ bụghị otu ihe ahụ. Ndị a bụ mmetụta abụọ dị iche iche. Agụụ bụ ọchịchọ iweghara ihe, ịbụ nke m. Ịhụnanya bụ mmetụta uche nke etiti ya bụ nke ọzọ ma ọ bụghị m (centrifugal na ọ bụghị centrifugal). M ebe a dị iche n'etiti mmetụta uche na nghọta (ịhụnanya mmetụta uche na ọgụgụ isi).
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 na 37:XNUMX
"Ma ọ bụrụ na ịhụnanya sitere n'echiche nke uche ọ bụghị naanị mmetụta uche, mgbe ahụ enwere ohere inye ya iwu."
Mana ka, kedu ka esi agwa m ka m ghọta ihe ??? Ọ bụrụ na ị kọwaara m na m ka aghọtaghị ma ọ bụ ekwetaghị, ọ bụghị m kpatara!
Ọ dị ka ịmekọ ọnụ na onye bi na narị afọ nke 10 ka ọ ghọta ụdị heliocentric, ma ọ bụrụ na ọ ghọtara ahụike ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ọ ga-eme!
Ọ gwụla ma ị na-ekwu na mitzvah ịghọta Chineke pụtara ma ọ dịkarịa ala ịgbalị ịghọta ma ọ bụrụ na ị ghọtaghị ihe egwu, a na-edina gị n'ike.
Tu B'Av 23 - 07/2021/17 na 43:XNUMX
Ndị ọrụ ga-enyocha okwu ahụ ruo mgbe ị ghọtara. Echiche bụ na mgbe ị ghọtara ihe ị ga-ahụ ya n'anya. Ọ bụrụ na ịgaghị eme nke ọma, a ga-edina gị n'ike.
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 na 43:XNUMX
Na ajụjụ ọzọ: Kedu otu ị ga-esi na-edobe ma hụ onye agbata obi gị n'anya dị ka onwe gị ma ọ bụrụ na ọ bụ ịhụnanya ọgụgụ isi, gịnị ka a ga-aghọta ebe a?
A ghaghị ịghọta ihe ịbụ nwanne gị sitere n'Izrel pụtara. Ịghọta na ndị mmadụ bụ ụdị ezinụlọ (n'ime ezinụlọ ọ bụ ihe okike).
Tu B'Av 23 - 07/2021/16 na 51:XNUMX
Ọ bụ ikwu ọrụ nke ihe n'ihu ya okwu gbasara ọkpụkpụ ya? Dị ka ihe atụ, ịsị na tebụl bụ “ihe na-ekwe ka e debe ihe n’elu ya” bụ ihe e ji mara ya ka ọ̀ bụ ọkpụkpụ ya?
Tu B'Av 23 - 07/2021/17 na 44:XNUMX
Echere m na nke ahụ bụ njirimara. Ma eleghị anya, nke a bụkwa akụkụ nke echiche nke tebụl n'ozuzu. Mana n'ihe gbasara tebụl akọwapụtara nke dị n'ihu m nke a bụ njirimara ya.